Smartly Business Courses Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ပေါ် မူတည်. စီးပွားရေးသင်တန်းများ
ပေါ် မူတည်. စီးပွားရေးသင်တန်းများ APK ကို
ပေါ် မူတည်. ဆိုတာဘာလဲ?
ပေါ် မူတည်. တစ်အွန်လိုင်းသင်ယူမှုပလက်ဖောင်းသည်နှင့်တစ်ဦးအပြည့်အဝ-မိုဘိုင်း MBA ဘွဲ့ရကမ်းလှမ်း - ကြောင်းလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်အစာရှောင်ခြင်းအာရုံစူးစိုက်ခြင်း, သင်သည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း-အခုရှေ့ဆက်ကူညီပေးဖို့ပြည့်စုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကယ်နှုတ်တော်မူ။ ဒါဟာသင်, လာမယ့်အဆင့်အထိသင့်ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းယူအလုပ်အကိုင်များကိုပြောင်း, သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အထင်ကြီး, ဒါမှမဟုတ်သင့်ကိုယ်ပိုင်အောင်မြင်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ရန်လိုအပ်သမျှရဲ့။
ဘယျအရာပေါ် မူတည်. ဘာတွေများကွာခြား?
ပေါ် မူတည်. တွင်, သင်ငြီးငွေ့စရာဗီဒီယိုများခြင်းမရှိဘဲ, တစ်ချိန်တည်းမှာလေ့လာသင်ယူနှင့်လုပ်နေသဖြင့်သင်၏လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။ ပေါ် မူတည်. တစ်ဦးအလိုလိုသိ, ပျော်စရာသင်ယူစေသည်ပလက်ဖောင်း "လုပ်နေသဖြင့်သင်ယူခြင်း" နှင့်ဘယ်တော့မှ Over-ရှုပ်ထွေးနေသည်။ သင်ခန်းစာယူပြီးနေစဉ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသုံးပြုသူများအကြောင်းအရာတိုင်း 8.9 စက္ကန့်ပျမ်းမျှနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံ။ ပေါ် မူတည်. သဘောတရားများအားနှင့်ဥပမာ, တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်အသစ်သောအမြင်များ-စီးပွားရေးကျွမ်းကျင်မှုကျွမ်းကျင်နှင့်စီးပွားရေးကျောင်းသို့မဟုတ်အလုပ်ခွင်ပြင်ပအတွေ့အကြုံကိုရဖို့ရန်ပြီးပြည့်စုံသောသယံဇာတပေးပါသည်။
သင်ပေါ် မူတည်. အရာပေါ်လေ့လာရန်နိုင်သလား?
ကမ္ဘာ့ဦးဆောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကျောင်းများနှင့်အတူ aligned, ထို MBA ဘွဲ့ရဒီဂရီဘဏ္ဍာရေး, စျေးကွက်, စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုအပါအဝင်9core ကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြင်းအားကိုဖြတ်ပြီးသင်တန်းများပါဝင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကြာချိန်အတွက် 120 နှင့်5မိနစ်အကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု, တုံ့ပြန်ချက်-based သင်ခန်းစာများ 10 အထိအတူမြောက်မြားစွာသင်တန်းများပါရှိသည်။ သင်ခန်းစာကိုအကြောင်းအရာများပါဝင်သည်:
• MBA ဘွဲ့အစီအစဉ်၏အခြေခံ
• Plus အားသစ်သင်တန်းများလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကဆက်ပြောသည်ကြသည်!
WHO ကပေါ် မူတည်. DOWNLOAD သင့်သလဲ
သငျသညျအလုပ်အကိုင်များ switching အတွက်စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါက, သင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်ရှေ့ဆက်ရတဲ့နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပျော်စရာ, ထိုးထွင်းသိမြင်လမ်း၌သင်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေခြင်းပေါ် မူတည်. download လုပ်ပါ။
THE ပေါ် မူတည်. APP ကိုသုံးစွဲဖို့လိုအပ်တဲ့ဘာတွေလဲ?
ပေါ် မူတည်. သုံးစွဲဖို့သင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ပေါ် မူတည်. မိုဘိုင်း app ၏အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုများအတွက် 3G, 4G သို့မဟုတ် Wi-Fi ချိတ်ဆက်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
25.23 ကို MB